Nahoana ianao sy ny mpanjifanao no tokony hanao toy ny mpivady amin'ny 2022 | Martech Zone
Ny fitazonana mpanjifa dia tsara ho an'ny orinasa. Ny fikarakarana mpanjifa dia dingana mora kokoa noho ny fisarihana vaovao, ary ny mpanjifa afa-po dia azo inoana kokoa hanao fividianana miverimberina. Ny fihazonana ny fifandraisana matanjaka amin'ny mpanjifa dia tsy mahasoa fotsiny ny tsipika ambany amin'ny orinasanao, fa manafoana ny sasany amin'ireo fiantraikany tsapa avy amin'ny fitsipika vaovao momba ny fanangonana angon-drakitra toy ny Ny fandraràna an'i Google amin'ny cookies an'ny antoko fahatelo.
Ny fitomboana 5% amin'ny fihazonana ny mpanjifa dia mifandray amin'ny fitomboana 25% farafahakeliny amin'ny tombony)
AnnexCloud, antontan'isa 21 mitahiry mpanjifa mahagaga ho an'ny taona 2021
Amin'ny alàlan'ny fitazonana ny mpanjifa, ny marika dia afaka manohy mamorona angon-drakitra manan-danja ho an'ny antoko voalohany, (mifototra amin'ny fomba ifandraisan'ny mpanjifany sy ny fampiasana ny vokatra) izay azo ampiasaina amin'ny fomba manokana ny fifandraisana amin'ny ho avy amin'ny mpanjifa efa misy sy ny ho avy. Ireo antony ireo no antony, amin'ny taona 2022, ny mpivarotra dia tsy maintsy mifantoka bebe kokoa amin'ny fitazonana sy fikolokoloana ny fifandraisan'ny mpanjifa efa misy, mitovy amin'ny ataonao amin'ny vadinao.
Mitaky fitandremana sy fitandremana ny fiarahana – tsy manao tsinontsinona ny namanao ianao raha vao manomboka ny fifandraisana. Ny fividianana sôkôla na voninkazo ankafiziny ho an'ny vadinao dia mitovy amin'ny fandefasana mailaka manokana amin'ny mpanjifa iray - izany dia mampiseho fa miahy azy ireo ianao sy ny fifandraisana ifampizaran'izy roa. Arakaraky ny ezaka sy ny fotoana vonona hanorenana ny fifandraisana no mety hahazoan'ny roa tonta amin'izany.
Torohevitra amin'ny fitazonana ny mpanjifanao
Tohizo ny fifankahalalana. Ny fifandraisana dia miorina amin'ny fototra mafy orina, noho izany, ny fanaovana sy fitazonana fahatsapana tsara dia mety ho tena zava-dehibe.
Onboarding - Mamorona fanentanana fitaizana onboarding, izay ahafahanao manokatra tsipika fifandraisana mivantana, manampy amin'ny fametrahana ny orinasanao ho mpiara-miasa, fa tsy mpivarotra ho an'ny mpanjifanao vaovao fotsiny. Ity zotram-pifandraisana mivantana ity koa dia mamela anao ho haingana sy azo ianteherana amin'ny valin-teninao rehefa tonga aminao ny mpanjifa miaraka amin'ny fanontaniana na olana, izay tena ilaina amin'ny fananganana fitokisana. Tokony hampiasainao koa izy io mba hijerena sy hahazoany hevitra mety ananany mba hahafahanao manatsara kokoa ny traikefany. Raha ny marina, ny fifandraisana dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana.
Marketing Automation - Ampiasao ny automation marketing. Ny automation marketing dia tsy vitan'ny hoe manatsotra ny fizotran'ny fitaizana, afaka manampy anao hanangona sy hampiasa angona sarobidy momba ny mpanjifanao ihany koa. Ny mpivarotra dia afaka miditra amin'ny hevi-baovao ao anatin'izany ny vokatra na serivisy mety ho mahaliana azy, ny fomba ampiasana ny vokatrao na ny serivisinao, na raha nijery ny tranokalanao izy ireo. Ity data ity dia ahafahan'ny mpivarotra hamantatra ny mpanjifa vokatra na serivisy tokony ampiasaina, manome azy ireo fahafahana hivarotra ny mpanjifany amin'ny fanomezana ny filany. Tahaka ny fiheveranao ny mpiara-miasa aminao mialoha izay mety iriany na ilainy, dia tokony hatao ho an'ny mpanjifanao koa izany, satria manokatra varavarana hahazoana tombony fanampiny izany.
SMS Marketing - Mandehana finday miaraka amin'ny marketing SMS. Tsy misy dikany fotsiny fa mihamitombo ny varotra SMS miaraka amin'ny fiparitahan'ny finday ankehitriny. Ny marketing amin'ny finday dia manome fantsona mivantana eo am-pelatanan'ny mpanjifa ny orinasa iray, ary maneho fomba mahomby hampita vaovao manan-danja sy manan-danja. Ny hafatra SMS dia afaka mirakitra fifanarahana fampiroboroboana, naoty fankasitrahana ny mpanjifa, fanadihadiana, fanambarana ary maro hafa, mba hitazonana ny mpanjifa hirotsaka sy ho faly. Tahaka ny hifandraisanao amin'ny vadinao na hizara ny antsipirian'ny andronao amin'ny alàlan'ny SMS, tokony hizara vaovao amin'ny mpanjifanao koa ianao, amin'ny alàlan'ny fantsona mahomby sy mahomby.
Ireo marika izay mampiasa teknolojia hanorina fifandraisana lalina amin'ny mpanjifany, manome lanja tsy tapaka amin'ny alàlan'ny hafatra manokana, ary mitazona zotram-pifandraisana misokatra dia hanorina fifandraisana misy dikany amin'ny mpanjifany. Arakaraka ny hihamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta, dia vao mainka afaka mivoaka amin'izany ny tsirairay - toy ny fifandraisana amin'ny vadinao.
Tags: manaova zavatramihetsika amin'ny lozisialyAct-Onannexcloudfifandraisana amin'ny mpanjifafitazonana ny mpanjifafifandraisana amin'ny mpanjifaautomation marketingteknolojia marketingMartechmpivarotra martechfinday-barotraonboardingpersonalizationsms marketingmarketing amin'ny smscookies an'ny antoko fahatelo